Ejije NGAGHARỊ IWE NDI INYOM ABA – hoo!haa!!
Ka alụchara ọgụ sitere na ngagharị iwe ndi inyom Aba, ndi inyom Oloko, Abia Steeti ka na-ana onwe ha aka maka “ịlụ ọgụ ka nwoke” na ya bụ esemokwu dịịrị ha na ndi mba Britenụ.
Ihe butere ọgụ a bụ esemokwu dapụtara n’abalị iri n’asatọ nke ọnwa Nọvemba, afọ 1929, n’etiti nwanyị aha ya bụ Nwanyịrịụwa na nwoke onye ọna ụtụ bụ Emereụwa maka ịchọ ịna ndi inyom ego ụtụ isi nke megidere omenala.
Ọgbakọ “August Meeting” bụ nke e hiwere ka ọgụ ahụ nke kpalitere ịgba mbọ ichekwa ikike dịịrị ụmụ nwanyị na Naịjiriya bichara.
“August Meeting” bụ ejije na egosipụta mbọ ndi inyom na-agba na Naịjiriya, ọ kacha n’Ala-Igbo iji were chekwaba ikike dịịrị ha site n’afọ 1929 rute taa.
Ejije a bụ Paul Ugbede dere ya, Chiọma Onyenwe bụ Onye Mmepụta ebe Kenneth Uphopho bụ Onye Nhazi.
“August Meeting” leruru anya n’usoro ndi inyom Oloko gbasoro ka ha lụchara ya bụ ọgu nnwere onwe nke 1929 nke ụmụ nwanyị karịrị otu Narị nwụrụ na ya iji gaa n’ihu n’ichekwa ikike nakwa nkwanye ugwu dịịrị ụmụ nwanyị.
Puku pụrụ puku ụmụ nwanyị sonyere na ya bụ ngagharị iwe nke tụrụ ndi ọsite na mpaghara Owere ruo na mpaghara Kalaba.
Ọgụ idozi ọnọdụ ụmụ nwanyị anaghị ebi ebi, ịgba mbọ maka ikike dịịrị ụmụ nwanyị nke gbadoro ụkwụ n’egbe bere ugo bere dị oke mkpa maka na ka ọ dị taa ụmụ nwanyị enweghị ọnụ okwu n’usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Nkiri ya bụ ejije “The August Meeting” ga-ebido na Legọsị n’abalị iri n’asatọ nke ọnwa Nọvemba, Abụja bụ n’abalị iri abụọ n’atọ nakwa abalị irụ abụọ n’anọ nke ọnwa Nọvemba, Nsụka bụ n’abalị iri abụọ n’asaa nke ọnwa Nọvemba, Enugwu bụ n’abalị iri abụọ n’asatọ nke ọnwa Nọvemba, Ọka bụ n’abalị iri abụọ n’itoolu nke ọnwa Nọvemba, Owere bụ n’abalị mbụ nke ọnwa Disemba, ebe ọ ga-abịa na njedebe n’Aba n’abalị abụọ nke ọnwa Disemba.
Ndi pụtara na ya bụ ejije gụnyere ndi ejije aha ha na-ada ụda dịka Gloria Anozie-Young onye mere Nwanyịrịụwa, Bella Rose Okojie, Ijeoma Aniebo, Inna Erizia, Odera Orji nakwa Deola Gimbiya.
Previous Post: Ahu otutu nke akpaakwa nwa.
Next Post: Agentịna:Asọmmpi bọl ndi akpụda
Onweghị onye n’ime ha aha ya na-ada ụda. Ọdị ka ọ dị kpọsa; ọdị ka ọ dị e goro. Ejije abaghị uru chaa chaa.
Hmm, ndi osu imi. Ngafe m na-agakwa n’ihu